Tilmaamaha Khabiirku waxay Tilmaamaan Maxaan Sameyn Karaa Marka Gaadiidka Goobta Hoos u Dhacdo
Waa sida riwaayad marka aad aragto waxqabadkaaga SEO wuxuu ahaa liiska madow ee Google ama mida kale mashiinno raadin , mana jirto habka looga takhaluso arrintan. Si aad u hesho gaadiidka dabiiciga ah ee goobtaada, waa inaad la cayaartaa ereyada muhiimka ah, daabacaan maqaallada tayada leh, oo tilmaamaya nooca qalabka istaraatejinta raadinta loo baahan yahay ee boggaaga internetka.
Waa inaad xusuustaa waxyaalahan soo socda, ee Jason Adler, oo ah khabiir ku xeeldheer Semaat , si aad u xallisid arrimaha badan ee SEO-gaaga.
Mawduuca Maamulka: Hubi Qalabyada Webmasteraha
Waxyaabaha ugu muhiimsan iyo kan ugu muhiimsan waa inaad hubiso qalabyada webmaster-ka iyo helitaanka talooyinka farsamada halkaas. Isku day in aad dib u cusbooneysiiso qalabkii ugu danbeeyay oo aad iskaa dhowrto inaad ka taliso arimaha keeni kara hoos u dhac ku yimaada waxqabadka goobtaada - maquinas virtuales amazon.
Bing iyo Google waxay bixiyaan isticmaalkooda qalab badan. Waxaad naftaada dib u cusbooneysiin kartaa iyaga oo iska ilaali wixii ganaax ah ee bogagga internetka. Haddii aad haysato qalab kasta oo lagama maarmaanka u ah, waxaa jira fursado ah in website-kaaga uu heli doono darajo wanaagsan ee natiijooyinka raadinta raadinta. Haddii aanad diiwaangelin oo lagu xaqiijin bogga internetka ee qalabkaas, waxaad u badan tahay inaad soo dhaweyso dhibaatada maalmaha soo socda.
Mawaadiicda Layskarabo: Hubi Analytics
Haddii dhammaan qalabyada webmaster-kaaga ay wanaagsan yihiin, waa inaad tagtaa raadinta raadinta ee Google si ay u xaqiijiso warbixinnada Google ee raadintaada baayoolajiga ah. Hubi inay u dhiganto heerarka mashiinka raadinta. Haddii kale, goobtaada waxay u badan tahay inay saameyso. Haddii warbixinnadu ka duwan yihiin, waxaa jiri doona arrin aad u baahan tahay inaad xaliso sida ugu dhaqsaha badan.
Waa in aad marwalba fiirisid waxqabadka goobtaada oo ha u ogolaanin inay hoos u dhigto qiimaha kasta. Markaad xalliso dhammaan arrimaha farsamada, tallaabada xigta waa in lagu falanqeeyo isbeddelka goobtaada oo aad ku keydiso. Isbedelka maqaalladaada waa in la saameynayaa sida ugu dhaqsaha badan. Xogta ka soo baxa Google Analytics maalin kasta oo isbarbardhig si aad u ogaato nooca isbedelada loo baahan yahay ee dhinacaaga.
Si loo xaliyo arimaha algorithmic, waa inaad saxdaa ereyada muhiimka ah iyo odhaahyadaada. Waa inaad si taxadar leh u eegtaa haddii ay helayaan gaadiidka tayadaada ee goobtaada ama aan ahayn, dhammaantoodna waxaa lagu baari karaa Google Analytics si fudud.
Tallaabada xigta waa in la eego Qalabka Penguin iyo halkan u saxiix. Waa inaad sameysaa koonto Google ah oo ku soo lifaaq falanqayntaada si aad u hesho taariikhda algorithm ee Google si joogto ah. Qalabkani wuxuu kuu sheegi doonaa haddii waxqabadka goobtaada uu hoos u dhacayo iyo waxa noqon kara sabab macquul ah taas. Haddii ay jirto arrin la xiriirta goobtaada iyo algorithm, Penguin Tool ayaa ku sii wadi doona cusbooneysiinta. Google waxay ogaan kartaa oo liis gareyn kartaa boggagaaga haddii aadan xallin arrintaas sida ugu macquulsan. Waa inaad mar walba baartaa hababka SEO-gaaga oo aad doorato kuwa kuwaas oo caddaynaya in ay aad u fiican yihiin website-kaaga. Xaqiiji maqaallada tayadoodu hooseeyso oo ku dheji ereyada muhiimka ah ee iyaga ku jira si aad u heshid qiimeyn mihnad wanaagsan.